Dadka waaweyn iyo waxbarashada sare | Samfunnskunnskap.no
Bulshadu mar walba way is bedelaysaa. Waxa abuuranta teknoolajiyad cusub, taas oo saamayn ku yeelata xaaladaha isbedelada suuqa shaqada. Taasi waxay keeneysaa in shaqaaluhu la socdaan oo ay ay bartaan xirfado cusub
Qofka weyni wuxu qaadan karaa waxbarasho cusub, sii wadan karaa waxbarashadiisii hore ama uu qaadan karaa waxbarasho dugsi hoose/dhexe si uu u buuxiyo shuruudaha cusub ee looga baahan yahay suuqa shaqada.
Dad badan ayaa soo qabanqaabiya koorasyo kala duwan oo loogu talo galay dadka waaweyn. Kuwaas oo tusaale ahaan noqon kara, waxa qofku uu xiiso gaar ah u leeyahay, luqadaha ama kooras shaqo lagu helayo. Dawladda ayaa badanaamaalgelisa qaar ka mid ah koorasyadan.
Degmada ayaa ka masuul ah bixinta dugsiga hoose ee dadka waaweyn, gobolkukuna wuxuu masuul ka yahay bixinta dugsiga sare ee dadka waawey. Dadka waaweyn ee xaqa u leh tacliinta dugsiga hoose ama ta dugsiga sare waxa lagu siiyaa lacag la’aan. Waxa jira iyaguna dugsiyo sare iyo hoose oo gaar loo leeyahay oo bixiya waxbarashada dugsiga sare ee dadka waaweyn.
Dadka shaqodoonka ahi waxay koorasyo kala duwan ka heli karaan Nav. Ujeeddadu waxa weeye in dadka la baro waxay ku shaqo tagaan. Nav ayaa bixisa kharashka ku baxa koorasyada iyo iyada oo badanaa bixisa lacagta dadka kooraska dhigta
Dadka waaweyn xaq waxa ay u leeyihiin waxbarasho dugsi hoose/dhexe
Dadka waaweyn ee u baahan waxbarasho dugsi hoose/dhexe, waxa ay xaq u leeyihiin waxbarasho sidaas ah. Waxbarashadu waa lacag la’aan. Degmada ayaad ka heli war intaa ka faahfaahsan.
Xuquuqda dadka waaweyn ee waxbarashada dugsiga sare
Dadka waaweyn ee ku dhammeeyey dugsiga hoose/dhexe dalkoodii, balse aan ahayn waxbarasho dugsi sare ama aan helin ansixin in uu dhammeeyey dugsi sare oo waddankiisii ah, waxa ay xaq u leeyihiin waxbarasho dugsi sare. Waa masuul ka ah Gobolka
Qiimeynta aqoonta dibada lagala yimaado
Haddii aad xirfad ku baratay waddanka dibeddiisa oo aanad u haysan shahaadad, waa aad ku muujin kartaa waxaad taqaan imtixaan-xifadadeed. Imtixaan-xirfadeed waa qaab lagu qiimeeyo oo lagu ansixiyo aqoonta heer dugsi sare, se aqoonta waxa aad baran kartay adiga oo aan iskuul u gelin.
Faahfaahin intaa ka bada oo arrintan ku saabsan ka eeg bogga NOKUT